Finnmark [finmɑrk] (ku saabsan codkan maqalka) ama Finnmáku (Northern Sami) [Finnmark], Finnmarkin, Finninmark) waa gobolka ("fylke") ee waqooyiga bari ee Norway. Dhul ahaan, waxaa xuddun u ah gobolka Troms ee galbeedka, Finland (gobolka Lapland) koonfurta, iyo Ruushka (Murmansk Oblast) xagga bariga, iyo biyaha, badda Norway (Atlantic Ocean) ee waqooyi-galbeed, iyo Badda Barents ( Arctic Ocean) woqooyi iyo waqooyi-bari.
Gobolka ayaa markii hore loo yaqaan Finmarkens amt ama Vardøhus. Laga soo bilaabo 2002, waxaa ku jiray laba magac oo rasmi ah: Finnmark (Norwegian) iyo Finnmáku (Northern Sami). Waa qayb ka mid ah gobolka Sápmi, oo ka kooban afar dal, iyo sidoo kale gobolka Barents, waana degmada ugu weyn ee ugu yar ee Norway.
Qeybta waqooyi ee Yurubta Europe, halkaas oo xeebaha noorwiijiga u barbardhigo bariga, Finnmark waa degaan "Bariga kulmaan Galbeedka," dhaqanka iyo sidoo kale dabiiciga iyo juquraafi. Vardø, degmada bari ee gobolka bari ee Norway, waxay ku taallaa bari ka baxsan magaalooyinka St.Petersburg iyo Istanbul.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Finnmark&oldid=183206"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Oktoobar 2018, marka ee eheed 13:46.